माओवादी अंशवण्डामा अलमलियो
काठमाडौं । एमालेसँग एकता हुन्छ, एकता तीलको दाना फोडेजसरी आधाआधा अंशबण्डा गरेजस्तो हुनुपर्ने अडानमा अडिएपछि एमालेभित्र ठूलै भूकम्प गएको छ । वामदेव गौतम नाच्दै भन्न थालेका छन्– टाउकोबाट भएन अव पुच्छरबाट एकता प्रयास थालिन्छ । अर्थात कार्यकर्ता स्तरबाट एकता रे ।
यही सवालमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल पार्टी बिलय हुनसक्दैन, एकता हुने हो, एकता समान हिस्सेदारी हुनुपर्छ, हुन्छ भन्दैछिन् । यता शीर्ष नेतालाई एकताको जिम्मा दिइएको छ, सामाजिक सञ्जालदेखि कार्यकर्ता स्तरसम्म एकतका लागि दबाब अभियान सुरु भएको छ । दबाब दिएर हुने एकता कस्तो होला ? मानसिक चिरा पर्दापर्दै पनि एकता हुन्छ र ?
यस्तो एकता कति टिकाउ हुनसक्ला ? तैपनि माओवादी एकताकै लागि मरिहत्ते किन गरिरहेछ ?
प्रवक्ता पम्फाका अनुसार सम्मान, समानता र न्यायोचित रुपमा अर्थात दुई पार्टीको बराबरी हिस्सेदारीमा मात्रै पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ । पार्टी एकीकरण वस्तुगत आवश्यकता भएको र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा एउटा पार्टी अर्कोमा विलय हुनेगरी नभई नयाँ पार्टीलाई जन्माउने गरी एकीकरण गर्नुपर्छ । यो पार्टी प्रवेशको कुरा पनि होइन र एउटा पार्टी अर्कोमा विलय हुने भन्ने पनि होइन । दुई पार्टीलाई मिलाएर नयाँ पार्टी जन्माउने भनिएको हो ।े पार्टी एकीकरणमा अझै जनयुद्ध, चुनाव चिन्ह, सांगठनिक संरचना लगायतका विषयमा दुई पार्टीबीच समझदारी हुन बाँकी रहेको र समझदारी गर्न दुई अध्यक्षलाई जिम्मा लगाएकाले उनीहरुबाटै छिनोफानो हुनेछ ।